Eagle River/Conover House -Come Explore NearTrails - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe esanda kufakwa ifenisha, ikhaphethi futhi ilungiswe ngokwengxenye isemahlathini eMfuleni i-Wisconsin, leli khaya elivulekile elinamakamelo okulala amabili, indlu yokugezela amabili iyakwamukela ukuthi uhlole amahlathi aseNyakatho. Kungakhathaliseki ukuthi imidlalo yasemanzini, ukugibela imizila, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo ukubhukuda, ukudoba, uhambo losuku oluya emiphakathini yendawo; ubumnandi buzoba khona kubo bonke.
Leli kamelo lokulala elibili lingamukela kalula abantu abangu-8 ngokunethezeka ngaphandle kokuzizwa begcwele.
Umzila wokungena kwemoto ungathatha izimoto ezingu-6 ezipakiwe noma izimoto ezingaba ngu-3 ezinama-trailer
Amakamelo okulala amabili amakhulu namagumbi okugezela amabili aphelele angamukela kalula amaqembu angaba ngu-8 ngaphandle kokuzizwa ukwanda kakhulu. Ikamelo elikhulu lokuphumula elinamafasitela amakhulu kakhulu esithombe lenza kube nomuzwa wokuthi imvelo ingeniswa ngaphakathi. Indawo yokuhlala yangaphandle enompheme obheke i-Wisconsin River iyincomo ekahle kakhulu ngaleyo khefi lasekuseni noma i-twilireon nightcap enesidlo sakusihlwa sangaphandle. Umlilo wokukhempa wokupheka ama-marshmallows uqedela usuku. Umzila omkhulu wokungena kwemoto onendawo yokupaka eyanele yokuhlalisa omahamba-nendlwana. Indlu iphinde ibe ne-Wi-Fi, i-DVD player enokufinyelela ku-Netflix, i-grill yamalahle, i-Canoe enamaphini nezindawo zokuhlanza izingubo.
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-ATV/i-Snowmobile trail. 10-15 imiz. ukuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zokuphuzela utshwala kanye nezindawo zokudlela, isitolo esilula kanye nesiteshi segesi. Umfula i-Wisconsin egcekeni elingemuva. Eminye imiphakathi eseduze phakathi nehora eliyi- Shayela ihlanganisa i-Land 'O Lakes 10 imiz. Eagle River, and Watersmeet 15-20 imiz., Amachibi amathathu, i-Boulder Junction, ne-Rhinelander yimizuzu engu-40. I-Minocqua ingamaminithi angu-45.
Uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana nendawo, sicela uhlole i-The Conover Chamber of Commerce. Siphinde sibe nezincwadi namaphephambhalo endlini eyakhiwe ngamapulangwe enemininingwane ngezindawo ezithandwayo nemicimbi yomphakathi.
Ngingafinyelelwa nge-imeyili, i-SMS, ucingo noma ngesistimu yokuthumela imiyalezo ye-Airbnb. Ngenza konke okusemandleni ami ukuphendula phakathi nemizuzu engu- futhi ngizama ukungabi kude kakhulu namathuluzi okuxhumana uma unemibuzo. Kungaba nezikhathi lapho ngingase ngibe khona ezindaweni lapho kungekho khona ukufinyelela kwesevisi kamakhalekhukhwini noma isivikelo se-Wi-Fi. Uma ngingaphenduli ngemizuzu engu-30. ngokuvamile kubonisa ukuthi ngingaphandle kwezindawo zesevisi.
Ngingafinyelelwa nge-imeyili, i-SMS, ucingo noma ngesistimu yokuthumela imiyalezo ye-Airbnb. Ngenza konke okusemandleni ami ukuphendula phakathi nemizuzu engu- futhi ngizama ukung…